Fahad Yaasiin oo goordhaw soo gaaray magaalada Muqdisho – Radio Damal
Fahad Yaasiin oo goordhaw soo gaaray magaalada Muqdisho
Waxaa subaxnimadii hore ee Saakay soo gaaray magaalada Muqdisho taliyahii hore ee Nabadsugida Qaranka Fahad Yaasiin haatana ah Lataliyaha amniga qaranka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasoo maalmahii lasoo dhaafay ku sugnaa dalka Turkiga.
Saraakiil sar sare oo ka tirsan dhinaca amaanka dalka ayaa warbaahinta u xaqiijiyay imaatinka Fahad Yaasiin oo ay sheegeen in diyaarad qaas ah ah ay Saaka keentay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Jimcahii lasoo dhaafay oo ay taariiqdu aheyd 17-kii bishaan ayay aheyd markii diyaarad uu la socday Fahad Yaasiin oo kasoo duushay dalka Turkiga laga celiyay dalka Jabuuti, islmarkaana madaxtooyada Soomaaliya ay si kulul u Cambaareysay dowladda Jabuuti oo ay sheegtay iney ka dambeysay xayiraada Fahad Yaasiin, inkastoo dowladda Jabuuti ay iyana iska fogeysay eedeynta uga timid Madaxtooyada Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale jiray inuu baaqday shirkii guddiga amniga qaranka ee lagu waday inuu dhaco 18-kii bishaan kaasoo oo uu iclaamiyay madaxweyne Farmaajo, qorshuhuna ahaa inuu ka qeyb galo Lataliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, shirkaaso madaxtooyada sheegtay in dib loo dhigay soona sheegi doonaan waqtiga uu dhici doono.
Ugu dambeyntii Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa dhawaan xilkiisii ahaa Agaasimaha Hay’adda NISA ku waayay arinta la xariirta maqnaanshaha Ikraan Tahliil, waxaana taasi ay sababtay in khilaaf xoogan oo aan weli xal loo helin uu ka dhex taagan yahay madaxweyne Farmaajo iyo Raysal wasaare Rooble.